AGRI MYANMAR 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များ နေရာ နှင့် ပြခန်းပုံစံ ပြပွဲစီစဉ်သူ
Agri Myanmar 2019 သို့ ကြိုဆိုပါသည်
Agri Myanmar 2019 ဆိုတာ ဘာလဲ?
မည်သူတို့ ပါဝင်ပြသ သလဲ?
ဘယ်လို ဧည့်သည်များ တက်ရောက် သလဲ?
နေရာ ဘယ်လို ကြိုတင်ယူထား နိုင်သလဲ ?
ပါဝင် ပြသပါက ဘယ်လောက် ကုန်ကျမလဲ ?
Standard Booth package အတွက် ပြပွဲ စီစဉ်သူက ဘာတွေ ထောက်ပံ့ပေးထား သလဲ ?
ပြပွဲသို့ လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား ?